Goobaha Saxeexa Saxeexyada: Keenida boorarka 'Jiilka Guji-Iibsiga' | Martech Zone
Goobaha Saxeexa Saxeexyada: Keenista boorarka 'Jiilka-Guji-Iibsiga'
Talaado, Nofeembar 1, 2016 Talaado, Nofeembar 1, 2016 Andy Hamblin
The Ka maqnaanshaha guriga warshadaha waa warshad aad u weyn oo faa'iido badan. Xilligan casriga ah ee jahawareerka dijitaalka ah, ku xirnaanta macaamiisha markay "tagayaan" meelaha caamka ah wali qiimo weyn ayey leedahay. Boodhadhka, hoyga basaska, boorarka iyo xayeysiinta gaadiidka ayaa dhamaantood ka mid ah nolosha macaamiisha maalin kasta. Waxay bixiyaan fursado aan la tirin karin si ay si cad ugu sii daayaan farriinta dhagaystayaasha khuseeya iyadoon loo tartamin fiiro gaar ah kumanaan xayeysiis oo kale.
Laakiin had iyo jeer ma sahlana in olole Guri ka baxsan guriga laga saaro. Caqabada ugu weyn ee hortaagan warshadaha OOH waa marin u helideeda…
Miyaad heshay spare 100,000 oo dheeraad ah oo loogu talagalay ololaha OOH?
Dhibaatada ay Mulkiileyaasha Warbaahinta ee Warbaahinta ee loo yaqaan 'OOH Media Mulkiilayaasha' ay la kulmaan ayaa ah inay ugu kacayso iyaga isla sidii ay u qorsheeyeen oo ay u ballansadaan olole dhan £ 100,000 sida ay u sameeyaan ololihii £ 500 Isla qaddarka waqtiga iibka, isla waqtiga maamulka, isla waqtiga naqshadeynta ayaa dhammaantood galaya laba toddobaad oo xayeysiis dheer ah oo loogu talagalay adeegyada loo yaqaan 'Joe Bloggs' ee tuubooyinka maxalliga ah, sida loogu sameeyo olole qaran, miisaaniyad weyn oo soconaya bilooyin.
Runtii waa wax aan maskax lahayn. Haddii aad tahay milkiile warbaahin leh boorarka lagu kireysto, waxaad mudnaanta siineysaa ololeyaasha qaran ee bixin kara lacagaha badan. Taas oo ku adkayn karta ganacsiyada yar yar ee miisaaniyadahoodu hooseeyaan inay helaan muuqaal marka ay kiraysanayaan booska bannaanka. Taasina waa ceeb, labadaba ganacsiyada yaryar ee seegay fursadaha suuqgeynta weyn, iyo sidoo kale milkiilayaasha warbaahinta, ee ay ka maqan yihiin macaamiil badan oo macquul ah.
Xalku waa otomaatiga
Guri la'aan khubarada xayeysiinta, Saxeex xal u soo saareen dhibaatadan. Waxay la shuraakoobayaan milkiilayaasha warbaahinta iyo adeeg bixiyeyaasha si ay otomatig u noqdaan gebi ahaanba nidaamka ballansashada. Aaladda otomaatigga ah waxay ka dhigeysaa howsha mid qiimo jaban, taasoo la micno ah in milkiilayaasha warbaahinta aysan u baahnayn inay macaamiisha ka celiyaan iyadoo lagu saleynayo miisaaniyadaha yar yar. Software-ka ay u adeegsanayaan inay tan ku sameeyaan waxaa loogu yeeraa Suuqyada Saxeexa.
Suuqyada Calaamadaha Saxeexa OOH
Suuqa Signkick waa barnaamijyo ay milkiileyaasha warbaahintu dejin karaan si ay awood ugu siiyaan macaamiisha inay helaan oo ka ballansadaan booska ay ku leeyihiin xayeysiiska internetka. Waxay xiriir la leedahay milkiilayaasha warbaahinta nidaamyadooda helitaan si ay ugu muujiyaan helitaanka ugu dambeeyay ee boggaga macaamiisha khariidadaha internetka.
Loogu talagalay in looga dhigo suuqa xayeysiinta OOH mid aad u fudud qof walba, Suuqyada suuqyada ayaa u suurta galiya ganacsiyada inay:
Ka raadi oo ballanso boos xayeysiis khadka tooska ah - Macaamiisha si dhakhso leh ayey u arki karaan boggaga boorarka, boorarka iyo shaashadaha dhijitaalka ah ee la heli karo, illaa iyo intee iyo kharashka ku baxa. Milkiilayaasha warbaahintu waxay dooran karaan ikhtiyaarradooda gaarka ah, sida qiimaha goobaha lagu soo bandhigo, macluumaadka dheeraadka ah ee la soo bandhigayo, iyo in barnaamijku u furan yahay dadweynaha, ama macaamiisha tooska ah ee ay ku kalsoon yihiin iyo hay'adaha.
Raad olole - Mar alla markii booska xayeysiinta la sii ballamiyo macaamiisha ayaa la socon kara horumarkiisa, sida aad ugu raadin lahayd nidaamka geynta guntinta.
Maamul farshaxanka - macaamiisha ayaa soo rogi kara farshaxanadooda, ama la shaqeyn kara Milkiilayaasha Warbaahinta si ay ugu farsameeyaan farshaxan ahaan xayeysiintooda. Nidaamku wuxuu leeyahay hanaan habaysan, oo ka bilaabmaya u dirista tilmaamaha farshaxanka macaamiisha barta ballansashada waxayna ku dhammaanaysaa farshaxanka oo loo geeyo daabacaadda aad doorbidayso.
Hesho tilmaamo xusuusin ah iyo cusbooneysiin emayl ah - xusuusinta otomaatiga ah iyo cusbooneysiinta waxay hubineysaa in tallaabo kasta oo geeddi-socodka ah si wanaagsan loola socodsiiyo macmiilka, laakiin sida ugu-gacmaha-furan milkiilaha warbaahinta sida ugu macquulsan.
Si ka duwan barnaamijyada kale ee loo heli karo ballansashada booska bannaanka lagu xayeysiiyo, Calaamadaha Suuqa 'Signkick' ma ahan oo keliya inay diiradda saaraan Digital Out of Home. Nidaamku wuxuu awood u siinayaa iibsadayaasha inay la socdaan boodhadhkooda daabacan iyo boorarka si la mid ah sida ay ula socon karaan boodhadhkooda dijitaalka ah.
Hawlaha ka warbixintu waxay u furayaan milkiileyaasha warbaahinta fursado cusub
Suuqa Signkick wuxuu leeyahay shaqo labaad, taas oo ah uruurinta iyo falanqaynta xogta ku saleysan cidda iibsaneysa booska xayeysiinta OOH. Marka la falanqeeyo caadooyinka macaamiishooda, waxa ay eegaan iyo goorta, Milkiilayaasha Warbaahinta ayaa hirgelin kara qiimeynta goobta ay ku taageerto xogta, kobcinta dakhliga cusub iyo abuurista barnaamijyo wax ku ool ah oo dib-u-suuq geyn ah
Daraasadda Case Signkick: JCDecaux
Kalluunka weyn ee warshadaha OOH, JCDecaux wuxuu dhowaan lashaqaystay Signkick Marketplaces si uu u qaato buugaag otomaatig ah oo loogu talagalay goobahooda xayaysiinta ee Belgium. JCDecaux waxay aqoonsatay baahida loo qabo in la habeeyo nidaamkooda si loo furo wadooyin cusub oo ganacsi.
Adoo ka dhigaya habka ballansashada mid hufan, iyo u suurtagelinta macaamiisha inay maareeyaan ololahooda, JCDecaux waxay awood u yeesheen inay diirada saaraan istiraatiijiyadda iibka iyo dhisida xiriirka macaamiisha mustaqbalka. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay inay awoodaan inay iibiyaan booska xayeysiinta si ay ula dhisaan xiriiro macaamiisha miisaaniyadooda yartahay. Markay ololayaashaas xayeysiinta yar bilaabaan inay koraan, JCDecaux ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee ogaada.
Dhammaantood waa wax cusub, oo leh JCDecaux's website cusub socday oo soconayay 2 bilood oo keliya, laakiin ballansiyo ayaa durba soo galaya.
Otomaatiggu waa mustaqbalka OOH
Waqtiyadu way is badalayaan, sidoo kale waa sida dadku filayaan inay wax iibsadaan. Xilligan casriga ah waxaad ka iibsan kartaa wax walba dharka iyo cuntada, gawaarida iyo ciidaha khadka tooska ah. Marka maxaa diidaya in boodhadh iyo boorar lagu dhajiyo?
Suuqa Signkick ayaa u oggolaanaya milkiileyaasha warbaahinta inay galaan Jiil-guji-iibsiga, iyo in la aqbalo macaamiisha miisaaniyaddoodu kayartahay. Diiwaangelinta otomaatiga ah iyo qorsheynta ololayaasha xayeysiinta ayaa qof walba u oggolaanaya inuu helo marinka adeegyada iyo fursadaha ay heli jireen macaamiisha waaweyn oo keliya.
Tags: JCDecauxOOHOtomaatiga OOHguriga ka baxsansaxeex
Andy wuxuu ku dhexjiray warshadaha dibada mudo ka badan 10 sano, wuxuu ka shaqeynayay labada qorshe iyo iibsashada ololeyaasha iyo iibinta labadaba. CV-giisu wuxuu daboolayaa qaar badan oo ka mid ah magacyada aadka loogu ixtiraamo ganacsiga oo ay ka mid yihiin Posterscope, JCDecaux iyo ECNlive ka hor intaadan ku biirin Saxeex sanadka 2014. Wuxuu aad ugu ololeeyaa soo bandhigida teknolojiyadda ka shaqeysa warshadaha boodhadhka iyadoo ujeedadu tahay wanaajinta waxqabadka iyo dakhliga soo kordha.
Sida Internetku u Kacdoon U Sameeyay Khadka Tooska ah
Faa'iidooyinka fiidiyowgu u leeyahay raadinta, arrimaha bulshada, emaylka, taageerada… iyo inbadan!